Maxaa lagu arkaa magaalada Bergamo ee dalka Talyaaniga | Wararka Safarka
Maxaa lagu arkaa Bergamo
La Magaalada Bergamo waxay ku taal waqooyiga Talyaaniga In kasta oo aysan ka mid ahayn kuwa ugu caansan waddanka xagga dalxiiska maxaa yeelay waxay leedahay tartamayaal adag sida Venice ama Rome, runtu waxay tahay in magaaladani tahay jawharad weyn oo ay tahay inaan mar uun baarno. Waxay ku taal gobolka Lombardy oo aad ugu dhow Milan, marka cudurdaar ma leh in la tago oo aan la arag.
La Magaalada Bergamo waxay u qaybsan tahay Magaalada Sare iyo Magaalada Hoose, kuwaas oo ay ku xiran yihiin funicular. Magaalada Sare waa tan leh qaybtii hore ee waqtiyadii dhexe iyo Magaalada Hoose waa tan hadda ugu badan. Waxaan arki doonnaa dhammaan geesahaas oo aadan ka maqnaan karin magaalada Talyaaniga ee Bergamo.
2 Basilica ee Santa Maria la Duqa magaalada
4 Bergamo Cathedral
5 Castello ee San Vigilio
7 Palazzo Nuovo iyo Palazzo della Ragione
8 Magaalada Hoose
Aagga Magaalada Sare waa midka waxay leedahay magaaladii hore oo markaa waa aagga aan ka heli doonno waxyaabo badan oo aan aragno iyo halka aan ku joojin doonno wax badan. Piazza Vecchia waa xarunta qaybtii hore ee Bergamo, oo ah barxad qurxoon oo qadiimi ah oo qof walba jecel yahay. Dhexdeeda waxaan sidoo kale ku yeelan doonnaa taalooyin si aan u aragno sida Palazzo Nuovo ama Palazzo de la Ragione. Bartamaha fagaarahan waxaan ku arki karnaa Fontana Contarin, oo ah ilo hore oo lagu qurxiyay libaaxyo iyo sphinxes. Fagaaraha waxaa sidoo kale ku yaal Tower-ka bulshada, laga soo bilaabo qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad, oo ah munaarad duug ah oo la fuuli karo oo leh dawankeeda ugu weyn magaalada Lombardy. Tobanka saac ee saacadda munaaraddu soo dhacayso, iyadoo la xusuusto in xilligaas albaabada loo laabay derbigii hore ee magaalada.
Basilica ee Santa Maria la Duqa magaalada
Dhismaha basilica-kan wuxuu bilaabmay qarnigii XNUMX-naad oo lama dhammaystirin illaa dhowr qarniyo ka dib. Basilica-kaan wax irrid ah kuma leh wajiga, maxaa yeelay irriddiisa ayaa ku yaal dhinacyada, oo libaaxyo ku jiraan laba ka mid ah, kuwa libaaxyada cas iyo libaaxyada cad. Qaabka apse of basilica waa Lombard Romanesque gudaheeda gudaheeda waxaan ka helaynaa qaab gebi ahaanba baroque ah oo leh marmar qurxin leh, dabaqyo la jecleystay, iskudubyo rinji ah iyo faahfaahin badan oo naga dhigeysa inaan ku maaweelinno xiisaha qurxintaas.
Agagaarka Basilica-ka Santa María la Mayor waa kaniisad qurux badan. Waxay u taagan tahay albaabkeeda cajiibka ah ee marmar midab leh taasoo ka dhigaysa mid dareenkeena soo jiidanaysa dad badana waxay u maleynayaan inay tani tahay albaabka laga galo basilica-ka, maadaama ay aad uga sii yaab badan tahay. Tani waa albaabka laga galo masjidka Bartolomeo Colleoni . Gudaha kaniisadda dhexdeeda waxaa ku yaal taallo dhalaalaysa oo isaga iyo sarcophagus marble ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaan awoodi doonnaa inaan aragno waxyaabaha la qurxiyay ee Tiepolo.
Katidralka Saint Alexander waa Duomo of Bergamo. Kaniisaddan weyn ee loogu talagalay ilaaliyaha magaalada ayaa la bilaabay in la dhiso horaantii qarnigii XNUMXaad. Gudaha cathedral ka waan arki karnaa shaqooyinka farshaxanka qadiimiga ah oo leh cibaado kala duwan. Waxay kaloo leedahay khasnad kale, tiara ee Pope John XXIII. Shaki la'aan, waa mid kale oo muhiim ah oo ay tahay in lagu arko magaalada Bergamo aaggeedii hore.
Castello ee San Vigilio
Qasriyadani waxay deggenayd sayidyadii Bergamo qarniyo. Waxay ku taalaa buur dulmarta Magaalada Sare si ay isaga difaacdo weerarada suuragalka ah. Waan awoodnaa ku dhex lugee xayndaabka darbiga iyo sidoo kale ku raaxeeysiga aragtida magaalada iyo hareeraheeda. Meeshan laga soo bilaabo taawarradu sidoo kale waa la ilaaliyaa waana suurtagal in lagu baxo cag ama funicular. Waxaa habboon in halkaa loo tago aragtida muuqaalka muuqaalka leh ee ay nooga soo jeediso meelaha dhaadheer, maadaama aad xitaa arki karto buuraha Alps.
Haddii aan dooneyno inaan ku raaxeysto qeybtii hore ee magaalada oo aan ka nasano dhismayaasha, waxaan ku socon karnaa wadada Via Gombito, oo ah tan ugu weyn magaaladan. Wuxuu ka bilaabmayaa Piazza Mercato delle Scarpe dhexdeedana waxaan ka iibsan karnaa dhammaan noocyada shay ama waxaan ku raaxaysan karnaa nasashada makhaayadda.
Palazzo Nuovo iyo Palazzo della Ragione
Sida magaalo kasta oo wanaagsan oo Talyaani ah, ma noqon karto la'aan palazos. Kuwani waxay ku yaalliin Piazza Vecchia waana kuwa ugu muhiimsan magaalada. Ku Palazzo Nuovo waxaa loo qorsheeyay inuu noqdo kursiga mustaqbalka ee golaha magaalada magaalada inkasta oo ugu dambayntii ay ku taallay maktabadda oo ay qaadatay in ka badan saddex qarni in la dhammaystiro. Palazzo della Ragione waa qasrigii ugu da 'weynaa ee talyaaniga ka jiray iyo jawharad dhismeed.
Waan ognahay in meesha ugu xiisaha badan ay tahay qaybtii hore, laakiin markaad aragto waxaad mari kartaa Magaalada Hoose, oo umuuqata magaalo kale. Waxaa ku jira qodobo xiiso leh sida Piazza Dante ama Donizetti Tiyaatarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Maxaa lagu arkaa Bergamo